Ndi Social Media Na-egbu Branddị Gị? | Martech Zone
M a bit na ngere banyere nke a infographic si Ulo ahia. Iji gbue ika, ọ dị gị mkpa imebi ihe ụfọdụ na ejighị m n'aka na akwụkwọ ozi a na-akọwapụta nke ahụ. Agbanyeghị na ọ na-ewere enweghị nchekwube nke mgbasa ozi mmekọrịta, igbu ọchụ bụ ntakịrị okwu ikwubiga okwu ókè. Kedụ ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike ịbụ na-emejọ gị ika nwere ike ịbụ aha dabara adaba.
Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze bụ isiokwu a na-arụrịta ụka. Ọ bara uru n'ezie oge gị? Ọ na-enyere gị aka ma ọ bụ na-emebi mmetụta gị? Na onye ọ bụ n'ezie ezubere iche: ọhụrụ ahịa, ẹdude ahịa, nwere azụmahịa mmekọ, ma ọ bụ onye ọzọ kpamkpam? Zaa ajụjụ ndị a niile na oyi, eziokwu siri ike.
Nakwa, nyocha a nyere bụ iberi ma ọ naghị echebara nkwadebe na akụrụngwa ụlọ ọrụ mere na atụmatụ mgbasa ozi ha. M ga-atụ anya na ụlọ ọrụ mụtara ihe ha mụtara na ọ bụghị naanị ịdaba na mgbasa ozi mmekọrịta na-enweghị wulite ezigbo atụmatụ dị n'ime (yana usoro iji kpọtụrụ ndị ọrụ na atụmanya). Ọ bụ nnọọ ezi uche na anyị ga-ahụ ụdị gburu… ma anyị na-ahụ ọtụtụ ụdị na-ata ahụhụ na-enweghị isi mmebi n'ihi na ha adịghị akwadebe!
Tags: brandelekọta mmadụ media